Nin magaalada Burco ku dilay Haweeney ay wada socdeen iyo faahfaahin laga helay | Somalia News
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxeya haweeney xalay lagu dilay magaalada Burco oo meydkeeda la dhigay Isbitaalka guud Burco.
Marxuumad Ugbaad Cali Dhaban-loox oo ahayd hooyo heysata saddex caruur ah oo ninkeedii hore ay kala tageen ayaa la sheegay in nin ay sheeko wadaag ahaayeen, isku dayey inuu xoog ku kufsado, balse ay dagaal kala hortagtay, kadibna gacan-ka-hadal shex maray ay u geeriyootay.
Ninka falkan ku eedaysan ayey gacanta ku dhigeen ciidamada Booliska, waxaan socda baaritaanka kiiskan oo si weyn looga naxay, waxayna dadka asxaabta lahaa marxuumad Ugbaad ay sheegeen inay ahay Hooyo degan oo saddex Carruur ah dhashay, waxayna u direen tacsi.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaabka dilkeedu u dhacay, waxayna dadka degaanku sheegeen inuu ninku feer uga dhuftay wadnaha intii ay dagaalamayeen, halka warar kale sheegaan inay ninka ku ballameen is guursi balse uu shilkan kasoo hormaray.
Previous articleImaaraadka Carabta oo doonaya in la xiro saldhig Milatari oo dowlada Turkigu leedahay
Next articleWicitaanka Dhageystaha: